07|12|24 – Hira Malagasy amin’ny Krismasy sasak’alina [Genève, CH] – i am a malagasy in genève
16 décembre 2007 9 décembre 2008
Toy ny taona roa lasa teo aloha, dia hotanterahina amin’ny teny frantsay ravahina hira Malagasy ny fotoam-pivavahana Krismasy Sasak’alina ao amin’ny fiangonana protestanta Servette [Genève], ny Alatsinainy 24 Desambra 2007 :
– amin’ny 7 ora hariva, sakafom-pifaliana, ao amin’ny centre paroissial de la Servette, Genève [irina ho azo alohan’ny Alakamisy 20 Desambra 2007 ireo famandrihana toerana amin’ny sakafo | filankevitra +41 79 776 09 66],
– amin’ny 22:50 ora alina, fotoam-pivavahana sasak’alina andraisan’ny antokom-pihira Malagasy Valihan’i Jehovah anjara, ao amin’ny fiangonana protestanta Servette [Servette-Vieusseux, avenue Wendt 55, Genève, CH],
– toy ny fomba mahazatra dia mifarana amin’ny fizarana “vin chaud” ny fotoana.
Posté dans fivavahana, Valihan’i JehovahTagué antokom-pihira, christmas, fiangonana, fivavahana, hira, jehovah, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, noel, noely, valiha, valihan'i jehovah, vavakapar tomavana2 commentaires
2 réflexions sur “07|12|24 – Hira Malagasy amin’ny Krismasy sasak’alina [Genève, CH]”
Mahafinaritra be re ity blaoginao ity fa dia mazotoa hatrany e!!
Ankoatran’izay dia miarahaba tratry ny taona e!!
Faly mandray anao eto indray ry Tokinao 🙂
Sady miarahaba sy mirary soa sy fanambinana hoan’ny taona vaovao 2008 no misaotra amin’ny teny mamy sy fankaherezana. Dia manantena ny hamaky lahatsoratra ao amin’ny blaoginao tsy ho ela koa … fa mpandalondalo ao koa aho.
← 06|12|23 – Antsam-panahy Krismasy ‘Fa tsara Izy’ [Annemasse, FR]
07|12|25 – Fankalazana Krismasy iraisam-pinoana Malagasy [Genève, CH] →